Vaovao - Jereo eto! Ahitana onja lehibe misy fitaovana fanontana mandroso sy fitaovana fanontana maitso eto
Ny fananganana robot marani-tsaina sy ny pirinty mandeha ho azy, ny fitaovana fiarovana ny tontolo iainana maitso dia mitondra vokany mahafinaritra amin'ny endrika maso, ary ny fanontana miovaova dia mahatonga ny vokatra vita pirinty ho lasa namboarina manokana… Tamin'ny fampirantiana teknolojia fanontana iraisam-pirenena faha-10 tany Beijing, izay nisokatra tany Beijing tamin'ny faha-23, andiana fitaovana mandroso sy fitaovana maitso , Fampiharana amin'ny rafitra, sns., Dia aseho miaraka, mampita fanavaozana sy fironana vaovao amin'ny indostrian'ny fanontana amin'ny vanim-potoana niomerika.
Ny fanontam-pirinty dia tsy indostria manandanja eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny fiaraha-monina ihany, fa koa mitondra tantara mavesatra. Avy any Sina ny fanontana. Ny fampidirana fanontana karazana mihetsika avy any Chine mankany Andrefana dia nampiroborobo ny fampandrosoana ny fiarahamonina tandrefana. Fikomiana indostrialy maro manerantany no nampiroborobo ny fivoaran'ny teknolojia sy ny fitaovana fanontana, ary ny milina fanonerana offset, ny milina offset ary ny milina fanoratana nomerika.
Manao veloma ny "firaka sy ny afo", hiditra amin'ny "jiro sy herinaratra", ary raiso ny "isa sy tambajotra". Na dia fanavaozana mahaleo tena aza ny indostrian'ny fanontana ny fireneko dia mampahafantatra, mandevona ary mandray ny teknolojia mandroso ary nahavita fandrosoana miavaka tamin'ny fampandrosoana ny fampandrosoana maitso, niomerika, manan-tsaina ary nampifangaroina.
Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Fikambanan'ny Indostrian'ny fanontam-pirinty any Chine, amin'ny taona 2020, ny indostrian'ny fanontana ny fireneko dia hanana orinasa maherin'ny 100.000 sy toerana fitaterana mihoatra ny 200 ho an'ny fanontana fitaovana sy fitaovana. Nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny aprily 2021, ny sanda fanampiny amin'ny indostrian'ny fananahana haino aman-jery sy fanontana dia nitombo mihoatra ny 20% isan-taona.
Na dia nihatsara aza ny tanjaky ny indostrian'ny fanontana, ny tsena fanontana sinoa goavambe koa dia nahazo fiheverana bebe kokoa.
Wang Wenbin, filohan'ny fikambanan'ny indostrian'ny fanontam-pirinty any China, dia nilaza tamin'ny lanonana fanokafana fa mpamokatra 1 300 mahery avy amin'ny firenena sy faritra 16 no nandray anjara tamin'ny fampirantiana. Andian-orinasa mpanonta fanta-daza no nampiranty ny teknolojia voalohany sy ny vokatra vaovao. Nanaraka akaiky ny firoboroboan'ny haitao fanonta ihany koa ny fampirantiana, nanangana marika feno, preprasion nomerika, milina fanontana, kojakoja marika, lohahevitra aorian'ny paositra, lohahevitra fonosana ary efitrano lohahevitra hafa, nanangana zaridaina lohahevitra maitso sy manavao, ary ny fampirantiana mifantoka dia mijery, mandroso sy mitarika vokatra vaovao, teknolojia ary fampiharana ny rafitra.
"Ny fampirantiana dia tsy mampiseho fotsiny ny haitao mandroso sy ny fitaovana famokarana, fa kosa ampiasaina ho varavarankely hahafantarana ny fiovan'ny fangatahan'ny tsenan'ny mpanjifa amin'ny milina fanontana sy fonosana ary vokatra mifandraika amin'izany." Wang Wenbin dia nilaza fa raha miankina amin'ny fizotran'ny toe-karena amin'ny fampiratiana, ny indostrian'ny fanontana koa dia manafaingana ny famatsiana sy ny fangatahana docking ary ny fifanakalozana teknika. Atsofohy ny tsindry vaovao ao amin'ny dingan'ny fanavaozana mitohy.